Guul-darradii ku Dambaysay Guusha Ganacsi: Milton Snavely Hershey | Maankaab.com
Guul-darradii ku Dambaysay Guusha Ganacsi: Milton Snavely Hershey
9th September 2017 | Published by: maankaab
Hershey waa aasaasaha shirkadda macmacaanka samaysa ee Hershey Chocolate company (waqtigan loo yaqaan Harshey Company). Waa shirkadda ugu ballaadhan ee macmacaanka loo yaqaan jukulaatada samaysa.
Guusha ganacsi iyo horumarka uu gaadhay ee xataa sii waaray markii uu dhintay kadib kuma ay imaan si fudud iyo dhib yaraan, balse dedaal guul darro, qadhaadh, xannuun iyo tacab ku lammaan yihiin bay ku timid.
Markuu u Hershey wiilka yar ahaa waxa lagu daray dugsi guriyeed amma dugsiyada danyarta, balse waxa uu waxbarashada tooska ah ka tegay markii uu gaadhay dugsiga sare (fifth grade), kadib markii aabbihii ku tababaray ganacsiga daabacaahada.
Muddo yar kadib waxa uu isaga tegay shaqadii tobabarka, kadib markii uu tobabar ahaan u tegay shirkad kale oo magaalada Lancaster ee dalka Jarmalka. Waxa uu ka hawlgalaayey mishiin daabaca wargeysyada luuqada Ingiriisiga ku soo baxa ee Jarmalka, balse shaqadaas muu jeclayn oo wuxuu u arkaayey in tahay shaqo caajis badan.
Maalin uu shaqadiisa ku jiray ayaa si aan kas ahayn waxa ay koofiyad uu xidhnaa ugu dhacday gudaha mishiinka, isagoo ka welwelsanaa ninka madaxda u ahaa oo aad u cadhaysnaa. Markiiba waa la eryey. Waxa uu ka welwelay waalidkii sida ay u noqon doonaan marka ay maqlaan warka eriskiisa, balse aabbihii ayaa ninkii madaxda u aha aka codsaday inuu fursad kale siiyo, waana la siiyey.
Mr. Herveyeedadii iyo hooyadii waxa ay maalintaas ka fikireen in shaqadan shaqo ka duwan uu qabto. Waxa ay kula taliyeen inuu barto ka ganacsiga iyo samaynta nacnaca. Waxa ay hooyadii u diyaarisay goob uu ka shaqeeyo oo nac-naca lagu iibiyo si uu xirfadaas u helo.. Sidaa darteed, ka hor intii aannu 20 jirka noqon waxa uu samaystay ganacsi macmacaanka ah oo u gaar ah.
Intii uu ganacsigaas ku jiray waxa uu bartay sida malabka macmacaan amma nacnac looga sameeyo. Waxa uu ku fikiray inuu samaysto shirkad u gaar ah oo malabka nacnaca iyo macmacaanka kale ka samaysa. Waxa uu yagleelay shirkad la odhan jiray Lancaster Caramel Company.
Hershey waxa uu Carwadii la odhan jiray World Fair ee magaalada Chicago ka dhacday ka qaybgalay 1893-kii. Waxa uu aad ula dhacay mishiin Jarmalka lagu sameeyey oo jukulaatada in lagu farsameeyo loogu talagalay, kadib si dhakhso ah buu u iibsaday. Sannad kadib waxa uu aasaasay shirkadda Hershey Chocolate Company.
Sannadkii 1900, waxa uu iibiyey shirkadiisii malabka oo uu siiyey ha milyan oo dollar. Lacagtii uu ku iibsaday shirkada waxa uu shul 1,200 acres ah. Waxa uu ku dhaqay lo’ oo uu caanno daray ah ka helo, taasi waxay sabab u noqotay inuu soo saaro jukulaato amma macmacaan ka kooban caano.
Aakhirkii waxa uu sameeyey shirkad aad u ballaadhan oo baaxadeedu magaallo dhan leeg tahay, waana halka maanta loo yaqaan magaalada Hershey amma Goobta ugu macaan adduunka (The Sweetest place on earth).